HR Executive (Code - 29865) | Dagon Glory Co., Ltd. ﻿
HR Executive (Code - 29865) M/F (5)
• HR ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သော Certificate (or) Diploma ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
• Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ Microsoft Office (Word, Excel, Email & Internet).
• Recruitment & Payroll ပိုင်းသိရှိနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
• သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၂နှစ်နှင့် အထက် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
• ၀န်ထမ်းရေးရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအကြောင်းသိရှိနားလည်ရမည်။
We offer Mon - Sat ~ (8:30 - 5:30)
Salary - 2.5 L and above
Work location Hlaing Township.
HR Executive Services Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobinYangon DagonGlory Engineering & Technical jobs Engineering & Technical jobs Services Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Yangon (Rangoon) 429 Days